DHAGEYSO:Howlgal amni xaqiijin ah oo xalay laga fuliyay warta nabadda | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Howlgal amni xaqiijin ah oo xalay laga fuliyay warta nabadda
DHAGEYSO:Howlgal amni xaqiijin ah oo xalay laga fuliyay warta nabadda
Ciidamada amniga gobolka Banaadir ayaa Habeenkii Labaad howlgal Amniga lagu sugayo ka Fuliyeen Degmooyinka qaar ee Caasimadda dalka Soomaaliya ee Magaalada Muqdisho.
Howlgakii Xalay ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadaha ka tirsan degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho oo Labo Cesho ka Hor sidaan oo kale ay Ciidamada amaanku howlgalo uga fuliyeen.
Saraakiisha Howgalka Hogagaminaysa ayaa sheegay inay Gacanata ku soo dhigeen Labo qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Kooxa Nabad Diidka ah.
Waxaa ay Shacabka ka dalbadeen inay Ciidamada la shaqeeyaan.
Guddoomiyaha Degmada Warta Nabadda Saynab Xaabseey oo ka dib markii howgalka la soo gabagabeeyay warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in ujeedka Howlgalku yahay sugidad amaanka degmada iyo guud ahaan Magaalada Muqdisho si Shacabka ay Nabad ugu noolaadaan.
Waxaa ay Bulshada ka codsatay inay Ciidamada kala shaqeeyaan Xaqiijinta amaanka ayadoo Ciidanka Howlgalka ku jiraan Fartay inaysan Wax dhibaato ah Shacabka u gaysan.
Previous articleIEBC oo hakisay tirinta codadkii laga dhiibtay Kiambaa
Next article117 qof oo ku dhimatay rabshadaha Koonfur Afrika